कमेडी च्याम्पियनका विष्णु गौँडेल र रिमा विश्वकर्मा साँच्चिकै प्रेममा छन् ? – Gazabkonews
कमेडी च्याम्पियनका विष्णु गौँडेल र रिमा विश्वकर्मा साँच्चिकै प्रेममा छन् ?
कमेडी च्याम्पियनका विष्णु गौँडेल र रिमा विश्वकर्मा साँच्चिकै प्रेममा छन् ? अविबाहित विष्णुले विबाह गर्लान् त सुन्दरी रिमालाई ? जो आँफैमा निकै ट्यालेन्ट नायिका पनि हुन् ? यो जोडीको विबाह साँच्चिकै हुने संकेत भने देखिन्छ, हेर्नुहोस् भिडियो